JawaabTap: Smart Match Raadinta Wicitaanka Caqliga | Martech Zone
Khamiis, Maarso 8, 2018 Arbacada, Maarso 7, 2018 Douglas Karr
U wac madal Sirdoonka, JawaabTap, ayaa soo saaray muuqaal cusub, Ciyaar Caqli badan, Taasi waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay arkaan qiimaha saxda ah ee wicitaan kasta oo macaamil soo gala oo ay u siiso ilaha suuq-geynta, xitaa illaa erayga muhiimka ah.
Awood u lahaanshaha la socoshada isha hogaaminta ka dibna loo qoondeeyo dakhliga iyo qiimaha margin waxay noo ahayd horumar weyn. Simon Hoe, Madaxa Global ee Digital at Maraakiibta 1st
Qalabku wuxuu kicinayaa adeegsiga xogta si loo wanaajiyo ololeyaasha loogu talagalay suuqleyda gudaha iyo wakaaladaha suuqgeynta, iyo sidoo kale u oggolaanaya hay'adaha macaamiisha wicitaankoodu yahay inay ka warbixiyaan ROI saxda ah.
Illaa iyo hadda, si loogu xiro dakhliga wicitaanka dhaqdhaqaaqa suuqgeynta loo baahan yahay wakiillada xarunta xiriirka si ay gacanta ugu saaraan qiimaha muhiimka ah nidaam gooni ah, ama u adeegsadaan isdhexgalka nidaamkooda CRM, oo aan had iyo jeer sax ahayn ama suurtagal ahayn.
Smart Match waa qeybta ka maqan halxiraalaha warbixinta ee suuqleyda. Kaliya maahan inaad kuficiso ololeyaasha iyada oo ku saleysan inta wicitaan ee olole kasta oo la soo saaro, laakiin waxaad ku habeyn kartaa habkaaga iyadoo ku saleysan dakhliga ama faa'iidada la soo saaray. Way fududahay isticmaalka Smart Match si loo ogaado ilaha kaxeeya iibka taleefankaaga qiimaha ugu sarreeya. Nick Ashmore, Madaxweyne Ku-Xigeenka Suuqgeynta ee 'ResponseTap'
Hadda adeegsanaya Smart Match, suuqleyda ayaa, eber la qabsi la'aan, u aaneyn kara iibka wicitaanka taleefanka goob kasta oo suuq taabasho ah oo dhacday wicitaanka kahor.
Wicitaanka Warbixinnada Ku-darka waxaa ka mid ah:
Warbixinta Guudmarka Qaadashada - muuqashada dhammaan ololayaashaada iyo waxqabadka suuqgeynta hal meel. Kalaqeybsiga udhaxeeya Ololaha, Kanaalka ama aragtida Dhexdhexaad ee fikradaha ku saabsan waxqabadka suuqgeynta ay soo saareyso wicitaanada ugu badan, dakhliga iyo faa'iidada.
Warbixinta Isbarbardhigga Astaanta - isbarbar dhig tusaalooyin kaladuwan oo badan oo ku saleysan tallaabooyin kala duwan. Soo ogow sida mugga wicitaanka, dakhliga iibka iyo faa iidada ay ugu kala duwan yihiin hal nooc ilaa mid kale.
Soo hel Demo Ciyaar Caqli badan
Tags: sheegashada xayeysiintaping ppcsifo u yeeransifeynta kanaalkaxayeysiiska facebookgoogle dabiici ahgoogle ppcsifeynta wicitaanka dabiiciga ahjawaab celinciyaar caqli badan
SalesRep.ai: Ka faa'iideysiga Sirdoonka si otomaatig u noqoshada isdhexgalka Multi-Channel